Azerbaijàna - Wikipedia
(tonga teto avy amin'ny Azerbaijana)
Repoblikan' i Azerbaijàna ((mg))
Teny ofisialy azerbaijaney (fitenim-panjakana)
Tanàna lehibe indrindra Bakı
- Rano (%) faha 112
10 073 200 mpo.
Anaran'ny mponina Azerbaijaney
Sandam-bola Manat (AZN)
I Azerbaijàna dia firenena ao Azia Andrefana, ao amin’ ny faritr’ i Transkaokazia izay manana morontsoraka ao amin’ ny Ranomasina Kaspiana. Manana velaran-tany mirefy izy. Ny renivohiny dia i Baku. Ny tanàna lehibe indrindra dia ny renivohiny. Mirefy 86 600 km² ny velarantaniny ary miisa 9 356 500 ny mponiny ao aminy araka ny fanisana natao tamin' ny taona 2013. Mamaritra azy avy ao avaratra i Rosia, avy ao atsimo i Iràna, avy ao atsimo-andrefana i Torkia, avy ao andrefana i Armenia, ary avy ao avaratra-andrefana i Jeôrjia. Ny tanin’ i Azerbaijàna dia mahafaoka ny faritra mizaka tenan’ i Karabagh Ambony (ao amin' ny tapany andrefan’ ilay firenena) sy ny Repoblika Mizakatenan’ i Nakhitchevan (ao amin' ny tapany atsimo-andrefana, misaraka amin’ ny sisa amin’ i Azerbaijàna amin’ ny alalan’ ny ampahan-tany tery an’ i Armenia). Ny ampahany be amin’ i Azerbaijàna dia ny lemak’ i Koura (izay ony lehibe indrindra ao amin’ ny faritra transkaokaziana). Ny ilany avaratr’ ilay firenena dia be tendrombohitra : i Kaokazy Lehibe dia manana haambo mirefy 4 466 m fa i Kaokazy Kely kosa 3 500 m. Maina ny toetany any Azerbaijàna.
Sarin-tanin' i Azerbaijàna
Ny mponina any Azerbaijàna dia ahitana indrindra ny Azery, izay vahoaka manam-piaviana torka. Maro koa ireo vahoaka vitsy an’ isa, ka anisan’ izany ny Armeniana izay hita indrindra ao Karabagh Ambony. Ny fivavahana silamo no fivavahana arahin’ ny maro anisa ao amin’ io forenana io, izay ahitana koa Kristiana vitsy. Ny fiteny azery no fiteny ôfisialy ao.
Misy solitany sy etona voajanahary ao amin’ ny Ranomasina Kaspiana i Azerbaijàna. Miankina amin’ ny fitrandrahana solitany ny toekareny. Na dia izany aza dia mbola isan’ ireo firenena tana mahantra i Azerbaijàna. Maro ireo orinasa tantanin’ ny fanjakana.
Repoblika sôsialista sôvietika taloha i Azerbaijàna izay nahazo ny fahaleovan-tenanay tamin’ ny taona 1991. Mpikambana ao amin’ ny Fianakaviamben' ny Firenena Mahaleo Tena (Communauté des États indépendants -- CEI) i Azerbaijàna. Nanomboka tamin’ ny taona 1990 dia nisy ny ady mitam-piadiana teo amin’ i Azerbaijàna sy i Armenia momba ny firafetan’ i faritr’ i Karabagh Ambony amin’ ny Repoblikan’ i Armenia.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Azerbaijàna&oldid=1046046"
Voaova farany tamin'ny 29 Jiona 2022 amin'ny 09:20 ity pejy ity.